အခမဲ့သင်တန်းများ Programming
သငျသညျအင်တာနက်မရှိဘဲမြင်ချင်လျှင်သင် download လုပ်အသီးအသီးအဘို့သင်တန်း $ 1 ။ သို့သော်ထိုသို့သင်တို့သည်ဤ website ကနေအခမဲ့အဘို့စောင့်ကြည့်နိုင်, မလိုအပ်ပါဘူး။ မှတ်ပုံတင်မည်မပါဘဲ
ဒီစီးရီးထဲမှာတကယ် Scratch နှင့်ခြေလှမ်းကနေအလွယ်တကူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်နှင့်တစ်ဦးနည်းစနစ်ကအောက်ပါဝဘ်မိုဘိုင်းပထမဦးစွာနဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းဖန်တီးရန်မည်သို့ခြေလှမ်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလအတွင်းကျွန်မကိုယ်ပိုင် website ကိုဖန်တီးပုံကိုသင်ပြ :)
သငျသညျကို Google နဲ့ Yahoo ကဲ့သို့အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ထိပ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့ဘယ်လိုသိဒါအခမဲ့ SEO ဆိုသည်မှာသင်တန်း၌သငျစာမကျြနှာပျေါတှငျနှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၏စာမကျြနှာကိုချွတ်နည်းစနစ် positioning ကိုလေ့လာသင်ယူမည်!, Bing မှနှင့် DuckDuckGo
ဒီနေရာတွင်သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြုပြင်နည်းစနစ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်နောက်သို့လိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိသမျှကိုခြေလှမ်းများနှင့်အတူအားလုံးကို web design ကို process ကိုဖြစ်ကြသည်။ မှန်ကန်သောအမိန့်ကိုအောက်ပါမရာအခြို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လုပ်စရာမလိုဘဲကောင်းတစ်ဦးရလဒ်ရရန်သေချာဖော်ဆောင်ရေး
Google Chrome အတွက် Extensions Developing
Google Chrome အတွက် extension များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မည်သို့၏စစ်မှန်သောဥပမာအား။ လုံးဝခြစ်ရာကနေကမ္ဘာ့လူသုံးအများဆုံး browser အတွက် extensions တွေကို program မှလေ့လာပါ
အဆင့်မြင့် level ကို
Android အတွက် Programming အားကစားပြိုင်ပွဲ
စပိန်အတွက် libgdx စာကြည့်တိုက်ကိုသုံးပြီး Android အတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်များကိုမည်သို့အပေါ်အပြီးအစီးသင်တန်းအမှတ်စဥ်, ခြစ်ရာကနေအဆင့်ဆင့်
Emmet အထုပ်နှင့်အတူသူတော်ကောင်းတရားစာသားအဘို့အ shortcuts Keyboard Shortcuts MUCHISIMO အဆိုခဲ့သလို html စာမျက်နှာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် css အပေါ်သုံးစွဲအချိန်ကိုချောမွေ့ဖို့ကူညီပေးပါမည်
အပြည့်အဝမှာ Java အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်နှင့်အခမဲ့, ဒီသင်တန်း၌သင်တို့ကိုဂျာဗား, variable ကို, စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်ရေးအပေါငျးအခြေခံသဘောတရားများကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်, တ္ထု, အမွေဥစ္စာကို, loops, ဖိုင်တွေ, စသည်တို့ကိုဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအားဤအသဘောတရားများကိုသုံးရတဲ့အဆိုပြုထားအလယ်အလတ်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူကောက်ချက်ချ စိတ်ကြိုက် encryption algorithm ကိုဖန်တီးဖို့
Haskell သင်တန်းကိုဒီမှာသင်ဖြေရှင်းနိုင်ဥပမာများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ, ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဘာသာစကား၏အခြေခံကျသောသဘောတရားများကိုလေ့လာသင်ယူမည်, သင်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ဗီဒီယိုထဲမှာဖြေရှင်းခံရဖို့ချင်လည်းအဆိုပြုနိုင်
ဒီစီးရီး၌ငါ features တွေကိုအ AI အ (Artificial Intelligence) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒီနည်းပညာနှင့်အနာဂတျအတှကျသူ့ရဲ့အလားအလာရှိမရှိကောင်းကျိုးသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ပေါ်မှာငါ့အမြင်တွင်စိတ်တွင်ရှိသည်ဖို့ကိုရှင်းပြ, ငါသည်သင်ထင်သိ, သငျသညျမှတ်ချက်ပေးရန်ခဲ့သနည်း
C ++ တို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြေရှင်းပြီး
စိတ်ပိုင်းဖြတ် programming language ကို C / C ++ လေ့ကျင့်ခန်းခြစ်အခြေခံပညာ programming ကို algorithms ကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သင်ယူဖို့
ဤသည်အပြီးအစီးသင်တန်းအခမဲ့ Android ကို Google ၏တာဝန်ရှိသူတဦးက tool ကိုအတူသုညကနေအဆင့်မြင့်ဖို့ဟာ android device များအတွက် application တစ်ခုဖန်တီးနည်းကိုလေ့လာဖို့အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မည်: Android အတွက်စတူဒီယို
Android အတွက် App များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ငါဟာ android တွေအတွက် applications များဖန်တီးရန်မည်သို့လေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြနှငျ့ဤဗီဒီယိုများသင်သည်ငါ၏ learning process ကိုပြသ, ကျနော်တို့ကဤဗီဒီယို inching အစားထက်သင့်ကိုငါအတန်းဖော်တာပါအထိန်းတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းအခြေခံကနေသွားပါလိမ့်မယ်, သငျသညျအကြှနျုပျ၏စီမံကိန်းကိုပူးပေါင်းကျနော်တို့အတူတူတစ်ဦးဖန်တီး app ကို?
သငျသညျကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့အလွယ်တကူ filter များလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တစ်ခုတည်းလိုင်း CSS နဲ့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များနှင့်အတူပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ, သင့်ပုံရိပ်တွေဓာတ်ပုံပြပွဲသက်ရောက်မှုများပေးစေခြင်းငှါ css filter များသင်ယူပါ!
iOS အတွက် Programming အားကစားပြိုင်ပွဲ
ဘယ်လိုသစ်ဘာသာစကားလျင်မြန်က Apple နှင့်အတူ iOS အတွက်တစ်ဦး flappy ငှက်စေရန်စသည်တို့ကို Objective-C, စီမံကိန်းကိုဖန်တီးရေး, Animation ၏ဖန်ဆင်းခြင်း, motion control, တိုက်မှုထောက်လှမ်း, အစားထိုး!
သင်၏ဝဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်မှု CSS ကို Menu ကိုလုပ်လုပ်နည်းအပေါ် Premium သင်တန်းအမှတ်စဥ်, menus တွေအမျိုးအစားအားလုံးကို: အလင်းဆုံ, အလျားလိုက်, ဆင်းသက်စာမျက်နှာ, ခြစ်ရာကနေအဆင့်ဆင့်!
iOS အတွက် App များ Developing
ဆွစ်သင်တန်း, ဘာသာစကားအသစ်ကို Apple က Objective-C ကိုအစားထိုး။ ဒီဒီနည်းကိုဘာသာစကား၏နောက်ခံ၏ပထမ Course ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါသည်ဤဘာသာစကား၏အထားအသိုဖွဲ့စည်းသောသဘောတရားများနှင့်အတူဤသင်တန်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေညီလာခံတက်ရောက်ခွင့်ကို 2014 ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ထက်နည်း 24 နာရီအပြီး
ဂျာဗား၌စိတ်တိုင်းကျ Encryption Algorithm, သငျသညျကြှနျုပျသ channel မှာရှိသည်သောအပြည့်အဝအခြေခံပညာသင်တန်းကိုမှာ java ကိုကြည့်၏နောက်ထပ်ဗီဒီယိုချင်တယ်ဆိုရင်
git နှင့် Github
ခြစ်ရာကနေသင်တန်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်အရာအားလုံးကိုသင်ယူရာအရပ် Github Git ။ git, github က desktop, ကို web ပညတ်တော်မူ၏။ Push, ကျူးလွန်, ပေါင်းစည်း, ပဋိပက္ခတွေ, ကိစ္စများ, ဆွဲ, ဒါကြောင့်အများကြီးပို။ အပြည့်အဝသင်တန်းကိုမှလင့်ခ်ကဒီ http://jotajotavm.com/curso-diseno-web-desde-cero ဖြစ်ပါသည်
ဘာသာစကား (Golang) Programming ကို သွား.
ဒီသင်တန်း၌သင်တို့ သွား. သင်အစွမ်းထက်စီမံကိန်းများကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်သော Google ၏ programming language ကို၏မူလအမြစ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်
က Android ကိုအဆင့်မြင့်သင်တန်းအတွက်တကယ်အမြင်များ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများမှမှီခိုဆေးထိုးလုပ်ဖို့ကြိုက်တယ်။ ထောပတ်ဓားနှင့် Dragger2 ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာများနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးနှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်
jotajotavm © - အခမဲ့သင်တန်းများ Programming